Lisansa fananganana rongony Connecticut - Ahoana ny fomba fampiharana
Lisansa fananganana rongony Connecticut: Ahoana ny fomba fampiharana
Ny senate Connecticut dia nanolotra volavolan-dalàna momba ny ara-dalàna marijuana vaovao ny sabotsy 5 jolay, andro iray taorian'ny nanambarana fa nifanaraka tamin'ny governora izy ireo.
Ny lalàna dia mikendry ny hametraka ara-dalàna ny fananana sy ny fampiasana rongony ho an'ny olon-dehibe 21 taona no ho miakatra ary koa handefa tsena rongony mifehy arahin'antoka amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rafitry ny fahazoan-dàlana miorina amin'ny rongony any Connecticut.
Io volavolan-dalàna vaovao io koa dia mametraka programa momba ny fitoviana ara-tsosialy mba hanampiana ny vahoaka voadona amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo fepetra lehibe momba ny fahazoan-dàlana hampiorina rongony Connecticut:
Karazana fahazoan-dàlana hampiorina rongony Connecticut
Araka ny volavolan-dalàna 01118, hisy karazana fahazoan-dàlana hananganana rongony Connecticut sivy, dia ny:
Mpanamboatra sakafo sy zava-pisotro
Hanomboka ny fizotry ny fahazoan-dàlana 30 andro aorian'ny famaritan'ny Social Equity Council ny mason-tsivana sy ny antontan-taratasy manohana ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy.
Hatreto, ny lalàna Connecticut dia mbola tsy nametraka cap de licence. Alohan'ny hanekena ny fangatahana dia hamaritra ny isan'ny fahazoan-dàlana farany ambony isan-karazany ny DCP ary hametraka izany ao amin'ny tranonkalany. Dimampolo isan-jaton'ny karazana fahazoan-dàlana no natokana ho an'ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy.
Dispensaries efa misy
DCP dia hanomboka hanaiky ny fisoratana anarana avy amin'ny dispensaries mankany amin'ny miafina koa hanombohana ny fampiasan'ny olon-dehibe manomboka amin'ny 1 septambra 2021. Ho tonga "mpivarotra antsinjarany", dia tokony:
Mandefasa drafitra fitehirizana medaly antsipirihany momba ny fomba hanomezana laharam-pahamehana ny fidirana rongony ara-pahasalamana, ao anatin'izany ny fifamoivoizana amin'ny mpanjifa, ny tsy fahampian'ny famatsiana, ny mpiasa ary ny fandefasana.
Mandoa vola $ 1 tapitrisa, izay azo ahena ho 500,000 50 $ raha mamorona “fiaraha-miombon'antoka iraisana” farafaharatsiny. Ny "fiaraha-miombon'antoka mpiara-miombon'antoka" dia tokony hanana XNUMX% farafaharatsiny izay fananan'ny mpangataka vola ara-tsosialy.
Mpamokatra (Mpamboly / mpanodina) efa misy
Fotoana kely aorian'ny 1 Jolay 2021, DCP dia afaka manome alalana ireo mpamokatra hamokatra rongony ihany koa ho an'ny olon-dehibe. Raha miafina mba hanompoana ny olon-dehibe, ny mpamokatra dia tsy maintsy:
Mandoa vola $ 3 tapitrisa, izay azo ahena ho 1.5 tapitrisa $ raha toa ka mamorona "fiaraha-miombon'antoka iraisana" roa, farafaharatsiny, izay tsy afaka mamboly.
Ny fiaraha-miombon'antoka mpiara-miombon'antoka dia tsy maintsy farafaharatsiny 50% fananan'ny mpangataka ara-tsosialy. Tsy iharan'ny loteria izy ireo.
Ireo mpamokatra dia mety tsy manana mihoatra ny 50% amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny orinasa mandritra ny fito taona voalohany.
Raha tsy mahomby izy ireo amin'ny famoronana fiaraha-miombon'antoka orinasa roa farafaharatsiny, ny mpamokatra dia tokony handoa ny $ 3 tapitrisa feno.
Mandoa vola $ 500,000 amin'ny kaonty ara-tsosialy na manome 5% ny toerana iasan'izy ireo ho an'ny mpangataka fitoviana ara-tsosialy, mampianatra izany orinasa izany mandritra ny dimy taona, manarona ny vidin'ny asa ilaina rehetra ho an'ny mpangataka ara-tsosialy ary miantoka ny fananana sy ny mpangataka ara-tsosialy. dia mahazo 5% farafahakeliny ny tombom-barotra.
Ampiharo ny drafitra fiarovana ny rongony rongony nankatoavin'ny DCP.
Mampihatra drafi-pivoarana ho an'ny mpiasa voarindra amin'ny ekipa sosialy.
Ny sarany aloan'ny mpangataka fananana ara-tsosialy miditra amin'ny loteria dia ambany 50% noho ny sarany fahazoan-dàlana misokatra. Izy ireo dia:
Ny vidin'ny mpivarotra na ny mpivarotra hybrid na ny vidin'ny fonosana vokatra hiditra ao amin'ny loteria dia $ 250, ny sarany amin'ny fahazoan-dàlana vonjimaika dia $ 2,500, ary ny sarany amin'ny fahazoan-dàlana farany na fanavaozana dia $ 12,500 XNUMX;
Ny karaman'ny mpamboly hiditra ao amin'ny loteria dia 500 $, ny vola ilaina amin'ny fahazoan-dàlana vonjimaika dia $ 12,500 37,500, ary ny saran'ny fahazoan-dàlana farany na fanavaozana dia $ XNUMX XNUMX;
Ny frais ho an'ny mpamboly mikraoba miditra amin'ny loteria dia $ 125, ny sarany ho an'ny lisansa vonjimaika dia $ 250, ary ny sarany amin'ny lisansa farany na fanavaozana dia $ 500;
Ny saram-pamokaran'ny vokatra hiditra amin'ny loteria dia $ 375, $ 2,500 ny vidin'ny fahazoan-dàlana vonjimaika, ary ny vola ilaina amin'ny fahazoan-dàlana farany na fanavaozana dia $ 12,500 XNUMX;
Ny vidin'ny mpanamboatra sakafo sy zava-pisotro na saran'ny serivisy fanaterana hiditra amin'ny loteria dia $ 125, $ 500 ny vidin'ny fahazoan-dàlana vonjimaika, ary 2,500 $ ny saram-pananana farany na fanavaozana; SY
Ny saram-pividianana vokatra hiditra amin'ny loteria dia $ 250, $ 2,500 ny vidin'ny fahazoan-dàlana vonjimaika, ary ny vidin'ny lisansa farany na fanavaozana dia $ 12,500 XNUMX;
Fandoavana hiditra amin'ny loteria hahazoana fahazoan-dàlana hampiorina rongony Connecticut
Ny lisansa fananganana rongony Connecticut tsirairay avy dia samy manana ny sarany fangatahana, na dia io aza no lalàna naroso, dia mety hisy fiovana amin'ny ho avy:
Retailer ny saram-pidirana amin'ny loteria dia dimy hetsy dolara, ny saram-pandraisana fahazoan-dàlana vonjimaika dia dimy arivo dolara ary ny fakana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo sy roa alina.
Mpivarotra hybrid ny saram-pidirana amin'ny loteria dia dimy hetsy dolara, ny saram-pandraisana fahazoan-dàlana vonjimaika dia dimy arivo dolara ary ny fakana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo sy roa alina.
mpamboly ny saram-pidirana hiditra amin'ny loteria dia iray alina dolara, ny sarany hahazoana fahazoan-dàlana vonjimaika dia dimy arivo sy roa alina dolara ary ny faktiora hahazoana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo amby fitopolo dôlara.
Mpamboly mikraoba vola aloa hiditra amin'ny loteria dia dimam-polo amby roan-jato dolara, ny saram-pandraisana fahazoan-dàlana vonjimaika dia dimy hetsy ariary ary ny sarany hahazoana lisansa farany dia iray alina dolara.
Mpanamboatra vokatra ny saram-pidirana hiditra amin'ny loteria dia dimam-polo amby fiton-jato, ny vola aloa fahazoan-dàlana vonjimaika dia dimy arivo dolara ary ny fakana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo sy roa alina.
Mpanamboatra sakafo sy zava-pisotro vola aloa hiditra amin'ny loteria dia dimam-polo amby roan-jato dolara, ny saram-pandraisana fahazoan-dàlana vonjimaika dia arivo dolara ary ny fakana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo dolara.
Packager vokatra ny saram-pidirana amin'ny loteria dia dimy hetsy dolara, ny saram-pandraisana fahazoan-dàlana vonjimaika dia dimy arivo dolara ary ny fakana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo sy roa alina.
Serivisy fanaterana vola aloa hiditra amin'ny loteria dia dimam-polo amby roan-jato dolara, ny saram-pandraisana fahazoan-dàlana vonjimaika dia arivo dolara ary ny fakana fahazoan-dàlana farany dia dimy arivo dolara.
Misy ihany koa ny sarany ho an'ny tranoben'ny dispensaire mba ho lasa mpivarotra antsinjarany (dimy alina dimam-jato sy roa hetsy) ary ny saram-panovana lisansa ho an'ny mpamokatra iray hiditra amin'ny tsenan'ny rongony rongony (dimam-polo amby fiton-jato sy arivo). Ary farany, dimam-polo dolara ny fisoratana anarana ho an'ny mpiasa ary folo ny mpiasa mpiambina na manan-danja.
FIVAVAHANA MISY: CANNABIS SPAC
Ahoana ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana hananana rongony Connecticut?
Tsy dia misy fampahalalana firy momba ny fizotran'ny fangatahana fahazoan-dàlana hampiorina rongony Connecticut, na izany aza, ny lalàna naroso dia mametraka izao manaraka izao:
Ireo mpangataka dia tokony hanao fangatahana amin'ny endrika sy amin'ny fomba voatondro avy amin'ny kaomisera;
Ny sampan-draharaha dia hamoaka amin'ny tranokalan'ny Internet ny vanim-potoana fangatahana, izay mamaritra ny daty voalohany sy farany izay hanajan'ireo sampan-draharaha fangatahana an'io karazana lisansa io. Ny fangatahana fahazoan-dàlana feno voarain'ny departemanta mandritra ny vanim-potoana fangatahana ihany no hodinihina.
Ankoatr'izay, alohan'ny daty voalohany haneken'ny departemanta ny fangatahana karazana karazana fahazoan-dàlana, ny departemanta dia, araka ny fahitany azy, dia mamaritra ny habetsaky ny fangatahana izay hodinihina ho an'io karazana fahazoan-dàlana io ary handefa izany fampahalalana izany amin'ny tranokalan'ny Internet.
Raha, rehefa tapitra ny vanim-potoana fangatahana karazana lisansa, ny departemanta dia mahazo fangatahana betsaka kokoa noho ny isa farafahakeliny hodinihina, ny mpandraharaha amin'ny loteria avy amin'ny antoko fahatelo dia hanao loteria hisafidianana ny fangatahana hojeren'ny departemanta.
Ny loteria ho an'ireo mpangataka fananana ara-tsosialy no voalohany. Ary araka ny volavolan-dalàna, farafaharatsiny 50% isaky ny karazana lisansa vaovao no havoaka ho an'ireo mpangataka ara-tsosialy. Aorian'izany, hisy ny loteria faharoa, anisan'izany ireo mpangataka ara-tsosialy tsy mahomby sy mpangataka hafa. Amin'ireto tranga ireto dia tokony:
Tsy omena fangatahana voaray aorian'ny faran'ny vanim-potoana fangatahana;
Omeo lanja mitovy amin'ny fampiharana feno natolotra nandritra ny vanim-potoana fangatahana;
Manaova loteria tsy miankina ho an'ny karazana lisansa tsirairay izay miteraka ny laharam-pahamehana ho laharam-pahamehana manomboka amin'ny iray ary mitohy manaraka; SY
Omeo ny departemanta miaraka amin'ireo fangatahana rehetra hodinihina, izay tokony ahitana ireo fampiharana voalahatra isa isa hatramin'ny isa faran'izay avo lenta mifanaraka amin'ny lalàna.
Raha nanapa-kevitra ny departemanta fa hamerina handinika ireo fangatahana folo ho an'ny karazana fahazoan-dàlana, ny loteria dia hanome ny departemanta ireo fangatahana laharana voalohany ka hatramin'ny folo. Izay fangatahana tsy nofidina tamin'ny alàlan'ity fizotran'ny loteria ity dia tsy hojerena ary tsy ho mendrika amin'ny fahazoan-dàlana.
Ny mpandraharaha loteria an'ny antoko fahatelo dia mamaritra ny laharana rehetra amin'ny fampiharana, ao anatin'izany ireo izay mihoatra ny isa hodinihina. Tsy misy mahasakana ny mpandraharaha loteria an'ny antoko fahatelo tsy hanome ny laharana isa amin'ny fisoratana anarana isaky ny karazana lisansa izay anaovana loteria na ny departemanta tsy mahazo ny laharana isa amin'ny fisoratana anarana isaky ny karazana lisansa izay anaovan'ny loteria ny mpandraharaha loteria an'ny antoko fahatelo.
Rehefa nampandrenesin'ny mpandraharaha loteria an'ny antoko fahatelo momba ny fangatahana nofidina hojerena dia dinihin'ny departemanta ny fangatahana tsirairay hanamafisana fa feno izany ary hamaritana raha misy fangatahana:
Ahitana mpanohana miaraka am-panamelohana tsy mendrika;
Ahitana mpanohana iray izay mety hiteraka fananana iraisana amin'ny fanitsakitsahana ny satroka voalaza ao amin'ity lalàna ity; na
Manana mpanohana iray izay misy ifandraisany amin'ny orinasa rongony any amin'ny fanjakana na firenena hafa dia manana fikarohana na fanapahan-kevitra ara-pitsarana izay mety hanimba ny tsy fivadihan'ny programa rongony, araka izay notapahin'ny departemanta, na manakana ny fandraisany anjara amin'ny rongony fanjakana. programa.
Raha toa ka mitovy na latsaky ny isa apetraka amin'ny tranokalan'ny departemanta ny isan'ny fangatahana natolotra, ny departemanta dia mety hanomboka handinika avy hatrany ireo fangatahana mifanaraka amin'ity fizarana ity nefa tsy mampiasa fizarana loteria.
Raha misy mpangataka na mpanohana tokana ny mpangataka iray izay tsy mendrika amin'ny alàlan'ny fepetra napetraka ao amin'ny lalàna, dia holavina ny fangatahana iray manontolo ary ny fandavana izany dia fanapahan-kevitra farany horaisin'ny departemanta. Na eo aza izany dia azo esorina ireo mpanohana ny orinasa mpangataka anarana ao amin'ny fandefasana fangatahana loteria alohan'ny fandefasana ny lisansa farany fametrahana lisansa Connecticut.
Na izany aza, tsy misy mpanohana fanampiny azo ampiana amin'ny fangatahana fametrahana rongony eo anelanelan'ny fotoanan'ny fidirana amin'ny loteria ary rehefa omena lisansa farany ny fananganana rongony. Raha esorin'ny mpangataka izay mpanohana azy dia tsy holavina ny orinasa mpangataka noho ny fidiran'ny mpanohana azy teo aloha raha toa ka nesorina tao anatin'ny telopolo andro ny mpanohana izany avy amin'ny departemantan'ny fanilihana ny mpanohana azy. Tsy latsaky ny telopolo andro aorian'ny fampandrenesana ny fangatahana fandavana dia azon'ny mpangataka atao ny maka fitsarana ambony any amin'ny Fitsarana tampony.
Isaky ny fangatahana nolavina ny departemanta dia mety, amin'ny alalàn'ny fahefany, hangataka ny hanome ny loto ny fampiharana manaraka. Ity dingana ity dia mety hitohy mandra-pahatongan'ny departemanta mamantatra ny fandinihana misimisy kokoa ny isan'ny fampiharana apetraka ao amin'ny tranonkalany Internet. Raha toa ka vitsy noho ny isa napetraka tao amin'ny tranonkalan'ny departemanta ny isan'ny fangatahana tavela, dia azon'ny sampana atao, araka ny fisainany, ny manokatra ny vanim-potoana fangatahana na manome lisansa vitsy kokoa.
Ny mpangataka rehetra voafidy ao amin'ny loteria ary tsy nolavina dia omena fangatahana fahazoan-dàlana vonjimaika, izay hatolotra amin'ny endrika sy fomba voatondro avy amin'ny kaomisera.
Ireo mpangataka dia manana enim-polo andro manomboka ny andro handraisany ny fangatahana vonjimaika hamenoana ny fangatahana. Ny zony hangataka fahazoan-dàlana vonjimaika dia tsy azo afindra.
Rehefa mahazo fangatahana vonjimaika avy amin'ny mpangataka iray, ny departemanta dia handinika ny fangatahana feno ary hanamafy fa ny fampahalalana rehetra omena mikasika ny drafi-pandraharahana, ny mpanohana na ny mpivarotra antoko fahatelo dia azo ekena ary mifanaraka amin'ny fizarana sy ny lalàna mifehy izany.
Raha mahatratra ny fenitra voalaza ao amin'ny lalàna ny fangatahana vonjimaika dia omena alalana vonjimaika ny mpangataka. Ny fahazoan-dàlana vonjimaika dia tsy azo afindra. Raha toa ka tsy mahafeno ny fenitra voalaza ao anaty lalàna na tsy vita ao anatin'ny enim-polo andro ny fangatahana vonjimaika dia tsy mahazo fahazoan-dàlana vonjimaika ny mpangataka.
Ny fanapahan-kevitry ny sampana tsy manome fahazoan-dàlana vonjimaika dia farany ary azo apetraka mifanaraka amin'ny lalàna ankapobeny. Tsy misy mahasakana ny mpangataka vonjimaika tsy handefa fangatahana loteria ho avy.
Ny fahazoan-dàlana vonjimaika dia tapitra aorian'ny roa ambin'ny folo volana ary tsy havaozina.
Ny manana fahazoan-dàlana vonjimaika dia afaka mangataka fahazoan-dàlana farany an'ny karazana fahazoan-dàlana izay nangatahan'izy ireo nandritra ny vanim-potoana fangatahana voalohany.
Tapitra ny fahazoan-dàlana vonjimaika aorian'ny 14 volana. Ny manana fahazoan-dàlana vonjimaika dia afaka mangataka fahazoan-dàlana farany mandritra ny vanim-potoana fangatahana voalohany. Ny fangatahana fahazoan-dàlana farany dia mitaky izao manaraka izao:
Fifanarahana amin'ny mpivarotra ambin-tsena ankatoavina mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny volavolan-dalàna;
Zo iray hibodo ny toerana misy ny orinasa rongony;
Ny fankatoavana ny fizarana faritra ilaina amin'ny fananganana rongony;
Drafitra fananana ara-tsosialy;
Drafitra fampandrosoana ny mpiasa
Politika an-tsoratra hisorohana ny fanodinkodinana sy fampiasana diso tafahoatra ny rongony sy ny varotra ho an'ny olona tsy ampy taona;
Ny fepetra fiarovana hafa rehetra apetraka amin'ny departemanta mifototra amin'ny karazana fahazoan-dàlana manokana;
Fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana napetraka teo amin'ny orinasa rongony sy ny fikambanana mpanao asa soa; SY
Fanamarinana fa mampiasa fifanarahana momba ny asa ho an'ny tetikasa ho an'ny tetikasa fananganana $ 5 tapitrisa na mihoatra izy ireo.
Ny orinasa rongony manana fahazoan-dàlana farany nekena ihany no afaka manomboka miasa.
Ny fangatahana fahazoan-dàlana farany dia alefa amin'ny endrika sy amin'ny fomba nankatoavin'ny kaomisera ary tokony hampidirina, saingy tsy ferana, ny fampahalalana voalaza ao amin'ity fizarana ity, ary koa ny porofon'ireto manaraka ireto:
Fifanarahana amin'ny mpivarotra ambin-tsena ankatoavina mifanaraka amin'ny voalazan'ity lalàna ity;
Zo hitana ny toerana anaovana ny fananganana;
Fankatoavana ny fizarana toerana ho an'ny fametrahana rongony;
Politika an-tsoratra hisorohana ny fanodinkodinana sy fampiasana diso tafahoatra ny rongony sy ny varotra ho an'ny olona tsy ampy taona; SY
Ny fepetra fiarovana hafa rehetra apetraka amin'ny departemanta mifototra amin'ny karazana lisansa manokana.
Amin'ny fotoana rehetra alohan'ny fahataperan'ilay fahazoan-dàlana vonjimaika, ny sampan-draharaha dia afaka manome fahazoan-dàlana vonjimaika ho an'ireo manana fahazoan-dàlana vonjimaika ho an'ny karazana fahazoan-dàlana nampiharan'ilay fahazoan-dàlana. Alohan'ny fahazoana ny fahazoan-dàlana farany, ny manana fahazoan-dàlana vonjimaika dia tsy tokony hanana, hizara, hanamboatra, hivarotra na hamindra rongony. Ho fanampin'izay, ny departemanta dia afaka manao fizahana ny tranokala alohan'ny hamoahana fahazoan-dàlana farany.
Amin'ny fotoana rehetra aorian'ny nahazoany fahazoan-dàlana farany, ny orinasa rongony dia afaka manomboka asa, raha toa ka feno ny fepetra takiana rehetra amin'ny fanokafana orinasa mifanaraka amin'ny lalàn'ity fanjakana ity ary ny mpiasa rehetra dia voasoratra anarana amin'ny departemanta.
Momba ny programa momba ny fitoviana ara-tsosialy
DCP dia tsy maintsy mitahiry 50% amin'ny isan'ny fampiharana faran'izay betsaka izay tsy maintsy raisina ho an'ny karazana fahazoan-dàlana azo ekena ho an'ireo mpangataka ara-tsosialy.
Ireo mpangataka ara-tsosialy dia mahazo fihenan'ny 50% ny saran'ny fahazoan-dàlana ho an'ireo dingana telo voalohany hanavaozana.
Mamorona vola mitentina 50 tapitrisa dolara ho an'ny famatsiam-bola voalohany ho an'ny kapitaly fanombohana ho an'ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy, ny fandaharan'asa fanafainganana orinasa rongony, ary ny fiofanana ho an'ny mpiasa novolavolain'ny Social Equity Council.
Manomboka amin'ny 1 Jolay 2023, dia mitarika amin'ny 60% ka hatramin'ny 75% ny vola miditra amin'ny hetra rongony dia hoentina any amin'ny Tahiry ara-tsosialy sy fanavaozana. Ireo vola ireo dia azo ampiasaina hampiroboroboana ny fitoviana ara-tsosialy mifandraika amin'ny fidirana amin'ny renivohitra ho an'ny orinasa, famatsiam-bola ho an'ny fanabeazana ho an'ny mpiasa; ary famatsiam-bola ho an'ny fampiasam-bolam-piarahamonina.
Ao anatin'ny 45 andro aorian'ny fandaniana ny volavolan-dalàna, ny filankevitry ny Equity ara-tsosialy dia tsy maintsy mametraka fepetra ho an'ny tolo-kevitra ho an'ny antoko fahatelo mahaleo tena hitarika fandinihana ireto olana manaraka ireto, mifandraika amin'ny Connecticut:
Vokatry ny fandrarana rongony, ny fanaovana heloka bevava sy ny fanilikilihana ny fampiasana rongony ary ny politikam-bahoaka mifandraika amin'izany;
Ny firafitra ara-tantara sy ankehitriny, ny lamina, ny antony ary ny vokatry ny fanavakavahana ara-poko sy tsy fanahy iniana ary ny tsy fitoviana eo amin'ny fampandrosoana, fampiharana ary fampiharana an'io fandrarana io sy ny politikam-bahoaka mifandraika amin'izany;
Vokatry ny fiaraha-monina, toekarena ary fianankaviana maharitra maharitra noho ny fanavakavahana ara-pirazanana taloha sy ny tsy fitoviana nateraky ny fandrarana rongony taloha, ny fanilikilihana ary ny fanaovana heloka bevava;
Ny lamina misy eo amin'ny fanavakavahana ara-pirazanana sy ny tsy fitoviana amin'ny fidirana amin'ny fandraharahana, asa ary tombontsoa ara-toekarena hafa mipoitra eo amin'ny sehatry ny marijuana ao amin'ny fanjakana; SY
Ny raharaha hafa rehetra izay heverin'ny filankevitra fa misy ifandraisany ary azo atao tsara ny mianatra momba ny fanaovana tolo-kevitra ara-dalàna sy azo ampiharina amin'ny fametrahana sehatry ny orinasa rongony rongony azo ekena sy ara-dalàna.
Amin'ny 1 Janoary 2022, raha raisina ny valin'ny fandalinana dia tsy maintsy manome tolo-kevitra amin'ny governora sy ny komity momba ny lalàna ankapobeny, fitsarana, vola miditra ary mamatsy vola ny filankevitra ara-tsosialy sy ara-bola, vola miditra ary mamatsy vola amin'ny fampiharana ireo fepetra ara-tsosialy ireo. Ireo tolo-kevitra dia tokony hiresaka:
Mamorona programa mba hahazoana antoka fa ny olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina iharan'ny herisetra tsy mitovy dia manana fahazoan-dàlana mitovy amin'ny fahazoan-dàlana hanangana rongony;
Manondro mari-pahaizana fanampiny ho an'ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy;
Manome fanodinana fahazoan-dàlana haingana na laharam-pahamehana ho an'ireo mpangataka fitoviana ara-tsosialy ho an'ny mpivarotra, mpivarotra antsinjarany, mpamboly, mpamboly bitika, mpanamboatra vokatra, mpanamboatra sakafo sy zava-pisotro, fonosana vokatra ary fahazoan-dàlana hanaterana;
Mametraka mason-tsivana farafahakeliny ho an'ny orinasa rongony nahazo alalana tamin'ny na 1 Janoary 2022 izay tsy fananan'ny mpangataka ara-tsosialy hanaja ny drafitra nankatoavina hametrahana vola na hanome asa sy fotoana fanofanana ho an'ny olona ao amin'ny fiarahamonina iharan'ny tsy fanjarian-tsakafo;
Mametraka drafitra ara-tsosialy ara-tsosialy ho an'ny orinasa rongony nahazo alalana tamin'ny 1 Janoary 2022 na aorian'ny;
Fanangonana olona avy amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo hanatrika ny fandaharanasa fiofanana momba ny mpiasa napetraka ao ambanin'ny volavolan-dalàna;
Fampiasana azo atao amin'ny fidiram-bola azo avy amin'ny volavolan-dalàna hampisondrotra ny fitoviana vola;
Mamporisika ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa vola, ny orinasa rongony ary ny mpandraharaha amin'ny programa mpandefa rongony rongony natsangana teo ambanin'ny volavolan-dalàna;
Mametraka dingana iray hiantohana tsara fa ny mpangataka ara-tsosialy dia mahazo ny renivohitra sy ny fiofanana ilaina hananana sy hiasana orinasa rongony; SY
Mamolavola lisitry ny mpivarotra orinasam-pandraharahana vehivavy sy olom-bitsy izay azon'ny orinasam-panabeazana rongony ifanarahana amin'ny serivisy ilaina, toy ny fitaovan'ny birao, fotodrafitrasa teknolojia fampahalalana ary serivisy fanadiovana.
Ary koa, io volavolan-dalàna io dia mitaky ny filankevitry ny Equity ara-tsosialy, amin'ny 1 Oktobra 2023, mba hanao tatitra amin'ny governora sy ny Komitin'ny Fitsarana momba ny angon-drakitra fisamborana sy fanamelohana noho ny fananana rongony, ao anatin'izany ny fanapotehana ny tanàna, ny firazanana, ny miralenta ary ny taonany.
Manitatra ny volan'ny hetra Angel Investor hahafahan'ny mpampiasa vola mitaky trosa 40% amin'ny hetra amin'ny fahazoan-dàlana amin'ireto orinasa ireto, dia manome $ 15 tapitrisa isaky ny trosa.
Mametraka programa Cannabis Business Accelerator hanomezana fanampiana ara-teknika an'ireo manana fahazoan-dàlana haingana amin'ny alalàn'ny fiaraha-miasa amin'ireo manana fahazoan-dàlana ara-tsosialy maniry handray anjara amin'ny orinasa rongony. Mety hiara-hiasa amin'ny tarika amin'ny oniversitem-panjakana na oniversite izy io hamoronana ilay programa.
Mangataka ny Social Equity Council hiara-hiasa amin'ireo birao fampandrosoana ho an'ny mpiasa isam-paritra mba hamolavola ny birao fiofanana ho an'ny mpiasa, hiara-hiasa amin'ireo mpanome tolotra fiofanana ary hamorona fandaharam-pianarana aprentisialy manerana ny fanjakana.
Inona no raisina ho "Mpangataka fitoviana ara-tsosialy"?
Ny "mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy" dia faritana ho mpangataka fahazoan-dàlana hananana rongony izay manana 65% farafaharatsiny ary fehezin'ny olona iray na maromaro izay nonina tamina faritra tsy dia nifandrindra nandritra ny dimy farafaharatsiny tao anatin'ny 10 taona tamin'ny sivy tamin'ny 17 taona voalohany niainany.
Ny faritra misy fiantraikany tsy dia mitovy dia ny taratasy fanisam-bahoaka izay misy tahan'ny tsy fananan asa mihoatra ny 10% na manana taha ambony amin'ny fisamborana rongony tao anatin'ny 40 taona lasa.
Ny mpangataka ara-tsosialy dia tokony hanana karama mediana koa mandritra ny telo taona lasa izay tsy mihoatra ny telo heny amin'ny vola miditra amin'ny fanjakana.
Hetra amin'ny fahazoan-dàlana hananana rongony any Connecticut
Io volavolan-dalàna io dia handoa hetra ambongadiny $ 1.25 isaky ny voninkazo maina lanja, $ .50 isaky ny lanjan'ny rongony vita amin'ny rongony, ary $ .28 isaky ny grama rongony mando lanja, ho fanampin'ny hetra fivarotana fanjakana 6.25%. Ny tanàna ihany koa dia mety mandoa hetra hatramin'ny 3% amin'ny fotoana amidy.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra azonao atao ianao mba hidirana amin'ny indostrian'ny rongony any Connecticut, aza misalasala Mifandraisa aminay.